Caanka caanka ah ee Hill-ka ee Hindiya waa inaad booqataa
Dooro LanguageEnglishFaransiiskaJarmalTalyaaniJapanSpainNorwaydeenishka,HollandiswiidishkadhalaalinFinlandGreekRuushChinese (La fududeeyay)CarabiBulgariaCatalanChinese (dhaqanka)CroatianCzechFilibiinCibraanigaHindiKuuriyaanPortugalRomaniaIndonesiaLatviaLithuaniaSerbianSlovakiaSloveniaUkraineVietnameseAlbaaniyaanIstooniyaanGalicianHungaryMaltaThailandturkishiiraaniAfrikaansMalaySawaaxiliIrishWelshBelarusIcelandMakedoniyaYadhishArmeniaAzerbaijanBasqueJoorijiyaanCreole HaitianUrduBengaliBoosniyaSugbaanoIsberentoGujaratiHausaHmongIgboJafaniisKannadaKhmerLaoLaatiinMaoriMaaratiMongoliyaanNepalPunjabisomaliTamilTeluguYorubaZuluMyanmar (Burma)JicewaKazakhstanmalagasyMalayalamSinhaalasesootoSudanTajikUsbeekAmharicKorisikanFrisianHawaiianKurdish (Farsiga)KyrgyzLaksambargishPashtoSamoanScottish GaelicShonaSindhiXhosa
Codso fiisaha Hindiya
E-Visa Hindida ah oo loogu talagalay Muwaadiniinta Ingiriiska
E-Visa Hindida ah oo loogu talagalay Muwaadiniinta Mareykanka
E-Visa Hindida ah oo loogu talagalay Muwaadiniinta Faransiiska
E-Visa Hindida ah oo loogu talagalay Muwaadiniinta Jarmalka
E-Visa Hindida ah oo loogu talagalay Muwaadiniinta Kanada
Wadamo badan »
Dulmarka Macluumaadka elektarooniga ah
E-Visa Hindida ah ee Muwaadiniinta Mareykanka
Shuruudaha Dukumiintiga elektarooniga ah
Shuruudaha Sawirka e-Visa
Shuruudaha Baasaboorka elektarooniga ah
HABKA CODSIGA E-VISA
HABKA CODSIGA E-VISA-KA EE MUWAADINIINTAN
E-VISA SOO GALKA
E-VISA DARIIQA SHAQAALAHA SHAQAALAHA
E-GANACSIGA VISA LIISKA
Noocyada elektarooniga ah
Ka Qaybgalka Caafimaadka Visa
5 Sano e-Dalxiis VISA
5 Sano e-dalxiis dal ku gal ah Muwaadiniinta UK
5 Sano e-dalxiis dal ku gal ah muwaadiniinta Mareykanka
Fiisooyinka elektaroonigga ah ee Muwaadiniinta Mareykanka
Fiisaha e-Ganacsiga ee Muwaadiniinta UK
Waa inuu arko HILL STATIONS IN INDIA
Waa inuu arko DELHI
Waa inuu arkaa KARNATAKA
Waa inuu arko KERALA
Waa in la arkaa JAMMU iyo KASHMIR
Waa in la arkaa PONDICHERRY
Waa in aad aragto dhufeysyada iyo dhufeyayaasha RAJASTHAN
E-Visa-ha Hindiya waxay dib u bilaabeen 156 dal
Macluumaadka socdaalka markabka Cruise
Macluumaadka Booqdayaasha Ganacsiga
Tilmaamaha si looga fogaado Diidmada elektarooniga ah
Monsoons ee Hindiya
SII FAHRI HIMALAYAS
CUNTADA WADADA CAAN AH EE HINDIYA
Safarka Gaangiska Quduuska ah
E-Visa Degdeg ah oo Hindi ah
Hindiya waxay ka mid tahay guryaha Himalayas taas oo ah hoyga qaar ka mid ah meelaha ugu sarreeya adduunka. Tani waxay si dabiici ah uga dhigeysaa Hindiya hoyga saldhigyada buuraha ee Waqooyiga, laakiin Koonfurta Hindiya waxay ku badan tahay inay bixiso sidoo kale markay tahay muuqaal qurux badan iyo dhaqdhaqaaqyo ka socda saldhigyada buuraha, baraf la'aan.
Nainital waxaa caan ku ah degmada harada ee Hindiya. Nainital waa goob qurux badan oo ku taal gobolka Kumaon ee ka tirsan gobolka Uttarakhand. Sare Naciina, Ayarpatta, Iyo Deopatha ku wareeji rugtan buurta. Meelo badan oo dalxiis ayaa waxaa soo buux dhaafiya dadka soo booqda. Ku Harada Naini, aragtida barafka, iyo beerta godka Eco waa qaar ka mid ah meelaha caanka ah ee loo dalxiis tago. Doomaha lagu raaco harada Naini waa waxqabad lagugula taliyay inaad ku dhaqaaqdo intaad halkaas joogto. Waad ku dhaweyn kartaa baabuur fiilooyin ah aragtida caanka ah ee barafka si aad uga hesho aragtiyo qurux badan buuraha.
Si aad u aragto buuraha oo ku daboolan buste baraf ah oo ay la kulmaan baraf, Diseembar illaa Febraayo waa waqtiga ugu fiican ee la booqdo.
Goobta - Uttarakhand
Darjeeling waxaa lagu naaneysaa Boqoradda Hills. Gawaarida ugu caansan ee aad ku qaadan doontid Darjeeling waa a Goobta Hidaha ee UNESCO Toy Tareen raacid. Ku Harada Senchal waa qurux waa goob xasilloon oo lagu booqdo intaad ku sugan tahay Darjeeling. Ku Kaniisadda Ghoom iyo Kaniisadda Bhutia Busty waa meel fiican oo laga helo ruuxi ahaantaada. Dalxiisayaashu waxay ku raaxeysan karaan socodka waddooyinka kala duwan iyo meelaha ugu sarreeya ee Darjeeling waxayna sidoo kale ku raaxaystaan ​​qulqulka webiga intaad halkaas joogto.
AKHRI WAX DHEERAAD AH:
Ka hel dekedda ugu habboon ee la oggol yahay ee laga soo galo Hindiya e-Visa.
Goobta - West Bengal
Cagaarka cagaaran ee rugtan buuraha ah ayaa hubin doonta in maskaxdaada la galiyo xaalad xasilloon oo deggan. Waxaad arki kartaa beero badan oo shaah iyo dhir udgoon ah markaad buuraha ka gudbeyso. Booqashadaada Munnar iska hubi inaad u marto wadada aad ku imaaneyso Echo dhibic si aad u hesho aragtiyo cajaa’ib leh sidoo kalena ugu qayli intaad kari karto. Ku Atukkal iyo Chinnakanal Waterfalls Munnar sidoo kale waa goob tag oo lala yaabo quruxda biyaha qulqulka leh. Sidoo kale waa inaad u jiheysataa Harooyinka Kundala intaad Munnar joogto. Haddii aad tahay duurjoog iyo xayawaan jecel markaa waa inaad u jiheysataa Beerta Qaranka ee Periyar taas oo qiyaastii u jirta safar 2 saacadood ah oo ka bilaaban doona Munnar si uu u daawado xayawaanka ku jira deegaanka dabiiciga ah.
Goobta - Kerala
Manali waa mid ka mid ah saldhigyada ugu caansan ee buuraha Hindiya oo dhan iyo khibradaha soo gelitaanka malaayiin dalxiisayaal ah sanad walba. Saldhigga buuraha wuxuu ku yaal wabiga Weas Beas, sidaa darteed markaad u gudubto Manali waxaad ka heli doontaa webiga inuu kugula socdo meelo badan. Manali waxay siisaa waxqabadyo badan nooc kasta oo safar ah. Kuwa biyaha jecel, webiga maraya Manali waa biimayn xad dhaaf ah oo leh duufaanno badan oo kacsan iyo biyo qallafsan. Haddii aad jeceshahay sare u qaadista dusha sare si aad u dareento xarago sidii aad adduunka oo dhan ugu sarreyso, waxaa jira fursado badan oo tamashleyn ah iyo meelaha ugu sarreeya ee Manali kuugu deeqo inaad ku lugeyso cagta ama baaskiil buur kor u qaadista ugu sarreysa.
Macbadka Hadimba, Macbadka Manu, Iyo Macbadka Vashishta waa wax yar oo ka mid ah macbudyo badan oo ku yaal Manali oo dalxiisayaashu booqdaan. Dooxada Solang waa meel caan ah oo la tago caan ku ah ciyaaro badan oo jimicsi jiilaal. Ku Roob-biyoodyo sidoo kale waa goob booqasho-booqasho ah oo u dhow Manali.
Akhriso sababta Monsoons ay u tahay waqti layaableh oo qorshaynta safarkaaga Hindiya.
Goobta - Himachal Pradesh
Mussoorie waa meel caan ah oo caan ku ah dalxiis oo leh dalxiis badan oo dalxiis laga soo galo. Saldhigga buur wuxuu ku yaal buuraha Garhwal. Mussoorie waxay kuu dejineysaa farxad muuqaal ah oo ka mid ah safafka Himalaya iyo dooxada Doon. Lake Mussoorie waa goob ay tahay inaad booqato intaad halkaa joogto. Ku caanka ah Kempty Falls waa wax lagu farxo in la daawado sidoo kale. Mussoorie waxay leedahay baarkin dalxiis oo aad ku qaadan karto jiingad, fuulid dhagaxan, iyo isu soo dhawaansho. Shirkadda Bagh waxaad ku raaxeysan kartaa doonnida iyo carruurtaadu waxay jeclaan doonaan raacidda baarkinka madadaalada.
Goobta - Dehradun
Magaalada caasimada ah ee gobolka Meghalaya waxay bixisaa aragtiyo qurux badan oo xaga sare ah iyo guga ubaxyadu waxay magaalada ka dhigayaan kuwo aad u qurux badan. Waxaa jira meelo badan oo ku yaal Shillong iyo hareeraheeda si aad uga tagto harada Umaim iyo harada Ward ilaa shillong peak. Labada dhacdo ee caanka ah ee Shillong waa Maroodi iyo Macaan dhac. Taariikhda dadka taariikhda jecel, Matxafka Don Bosco waa meel aad u wanaagsan oo lagu arki karo waxyaabo hore. Waad ku raaci kartaa doonta harada Ward halka ay ku taal Shillong iyo isboortiga biyaha xiisaha leh ee harada Umaim. Haddii aad jeceshahay fuulitaanka meelaha ugu sarreeya waad mari kartaa David Scott raad.
Goobta - Meghalaya
Kasol waa a xarun buur qurux badan oo ka yar la booqday. Ku Wabiga Parvati wuxuu ku socdaa saldhigga buurta iyo dalxiisayaasha booqashada ku yimaada webiga. Dooxada Tirthan ee u dhow Kasol waa goob qurux badan oo qurux badan oo loogu jecel yahay dalxiisayaasha si ay ugu raaxaystaan ​​waqti gooni ah oo nasasho leh oo ay ku sahmiyaan booska. Dadka halkaas u jooga hal-abuurnimo waxay ku lugeyn karaan wadada Chalal Trekking. Haddii aad rabto inaad ku nasato oo aad ku nasato barkad ka dib Berkadda Biyaha Kulul ee Manikaran waxay u jirtaa dhawr kilomitir. Meelaha ay tahay inaad sahamiso intaad joogto Kasol waa Kheer Ganga Fiinta qaar ka mid ah aragtiyo yaab leh ee safafka buuraha iyo caan ah Thakur Kuan.
Gulmarg waa a saldhig buur qurux badan dhulka Jammu iyo Kashmir. Waa kaliya 50 kiilomitir u jirta Srinagar. Saldhigga buurta waa caan loo yaqaan seeraha ubaxa. Jiilaalku waa waqtiga ugu fiican ee lagu jiro Gulmarg maaddaama buuraha dushooda ay ku daboolan yihiin bustayaal baraf waxaadna u raaci kartaa raacitaanka baabuurka kaabboolka ah mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee Gulmarg oo aad ku ciyaartid, barafka ku raaxaysatid, oo aad ku raaxaysatid barafka. Waxaa jira tacabiiro badan oo aad qaadan karto intaad ku sugan tahay Gulmarg. Waad mari kartaa meelaha ugu sarreeya laakiin laguuguma talinayo inta lagu jiro xilliga qaboobaha maadaama cimiladu tahay mid aan la saadaalin karin.
Baaskiillada buuraha sidoo kale waa waxqabad aad ka qaadan karto Gulmarg. Qiyaastii saddex iyo toban kiilomitir oo u jirta Gulmarg, harada Alpathar waa haro u eg saddex-xagal oo lagu dhigay goob qurux badan. Harada ayaa barafoobay ilaa Juunyo sidaa darteed waqtiga ugu fiican ee la booqan karo waa inta u dhaxeysa bilaha Luulyo ilaa Oktoobar.
Goobta - Kashmir
Meesha loo socdo waxaa loo yaqaanaa Iskodland ee Bariga. Ku caraf udgoon waxay hawada ka buuxisaa qaxwada, gaar ahaan xilliga goosashada. Cagaarka cagaaran ee buuraha iyo cirka buluugga ah waxay dareemayaan inaad janno ku jirto. Ku Namdroling Monastery waa goob caan ah oo diineed dhow Coorg. Laba dhudhun ayaa udhow Coorg oo sidoo kale waa booqasho, Abbey iyo Iruppu.
The goobta quduuska ah Talakaveri, asalka webiga Cauvery wuxuu ku yaal meel u dhow Coorg sidoo kale. Ku Xerada Maroodi ee Dubbare Dubbare wax ka yar hal saac ayuu u jiraa Coorg waadna awoodaa ku raaxayso maydhashada Maroodi halkaas. Waxa kale oo jira buuro yaryar sida Brahmagiri iyo Kodachadri waad mari kartaa. Waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa qulqulka webiga ee dhow.
Goobta - Karnataka
Fiisaha e-Dalxiiska ee Hindiya - Fiisaha Internetka ee Hindida ee Dalxiisayaasha
Hay'adda Socdaalka Hindiya waxay soo bandhigtay qaab casri ah oo loo adeegsado Codsiga Fiisaha Hindida ee Hindida ah. Nidaamka dalabka fiisada ee internetka waa mid fudud, fudud, dhakhso leh waxaana lagu sameyn karaa raaxada gurigaaga. Tani runti way ufiican tahay codsadayaasha maadaama booqdayaasha Hindiya loogama baahna inay ballan kadhigto booqasho jireed oo ay ku tagayaan Gudiga Sare ee Hindiya ama Safaarada Hindiya ee wadankaaga.
Hay'adda Socdaalka Hindiya waxay kuu oggolaaneysaa booqashada Hindiya iyadoo la codsado Hindida Visa khadka tooska ah ee shabakadan ujeedooyin dhowr ah. Tusaale ahaan ujeedkaaga aad ugu safreyso Hindiya waxay la xiriirtaa ujeedo ganacsi ama ganacsi, markaa waad u-qalantaa inaad codsato Fiisaha e-Ganacsiga ee Hindiya. Fiisaha e-Dalxiiska ee Hindiya (Hindida Visa Online ama eVisa India ee Dalxiiska) waxaa loo isticmaali karaa la kulanka asxaabta, la kulanka ehelka Hindiya, ka qeybgalka koorsooyinka sida Yoga, ama aragtida iyo dalxiiska.
Muwaadiniinta dalal badan oo ay ka mid yihiin United States, France, Australia, Germany, Spain, Italy xaq u leedahay Hindiya e-Visa(Fiisaha Hindida ee Hindida ah). Waad dalban kartaa Codsiga internetka ee elektarooniga ah ee fiisaha elektarooniga ah halkan.
Haddii aad wax shaki ah ka qabto ama aad u baahato caawimaad safarkaaga aad ku tageyso Hindiya ama E-Visa Hindiya, la xiriir Hindida Visa Caawinta Hindida caawimaad iyo hagis.
Khalad ayaa dhacay, fadlan isku day mar kale.
Macluumaadkaaga shaqsiyeed waxaa si qarsoodi leh loogu xafidayaa barnaamijyada "Secure Sockets Layer" (SSL)
MACLUUMAADKA E-VISA INDIA
Dukumentiyada e-VISA LOO BAAHAN YAHAY
KA-QEYBAHA CAAFIMAAD e-VISA
Dalxiis 5 sano e-VISA
QODOBADA GALKA & XEERARKA
QODOBADA & XEERARKA KA BAX
QODOBO FAA'IIDO LEH
INFO BOOQDAYAASHA GANACSATADA
e-VISA DALBANKA MAREYKANKA
TALOOYINKA LOOGA HORTAGO DIIDAYNTA E-VISA
WARBIXIYAASHA SHAQAALAHA SHAQAALAHA INFO
WAA INAAD ARAGTAA ISTICMAALKA HILL
Hagaha safarka ee Udaipur
SAFARKA XANUUNKA KARIIMKA AH
TOP 10 CUNTOOYINKA JIDKA INDIYA
KALA DUWANAANSHAHA LUQADDA EE HINDIYA
SIYAASADDA soo celiyo
KA CODSIGA INDIAN VISA INTERNETKA
© 2022 xuquuqda daabacaada ee www.india-visa-online.org
Diidmo: Fiisaha Hindida ee ay soo saartay degelkan ganacsi waxaa si toos ah looga adeegsadaa Xafiiska Socdaalka ee Dowladda Hindiya. Dowladda Hindiya si toos ah, si dadban ama si gaar ah uma magacaabin www.india-visa-online.org. Khidmadda khidmadda ayaa laga qaadaa adeegyadayada iyo Visa Levy-ka Dawladda ee loogu talagalay kuwa ka codsada degelkan.